Kolontsaina sy tanindrazana: olona mahalala fomba no tokony hitondra an’i Madagasikara | NewsMada
Kolontsaina sy tanindrazana: olona mahalala fomba no tokony hitondra an’i Madagasikara
Mpanao politika, hono. Mpandraharaha, hono. Mpanefoefo, hono. Manana diplaoma be, hono, sns. Ireo sy izay iray tarika aminy no hieboeboana sy haranty imason’ny olona. Iza moa ny tsy nandrangaranga ireo ny nitondra an’i Madagasikara taorian’ny fiverenan’ny Fahaleovantena kanefa izao ihany ny niafaran’ity firrenena ity ?
Ireo rehetra ireo, endrika ivelany avokoa ! Ny latsaka anaty izay tena maha olona ny olona, tsy fantatra na misy na tsy misy. Tsy misy firenena iray handroso amin’ny tsy azy. Io ny mahatonga an’i Madagasikara hitana ny rambony maneran-tany ankehitriny. Hosoka sy ankosotra ny ankamaroan’ny iainan’ny Malagasy sy ny mpitondra fa tsy ilay maha Malagasy. Tsy mahavaha olana eto Madagasikara velively ny hevitra hoentina amin’ny fomba fisainana vahiny izay ezahina ampidirina sy ampiharina eto an-toerana. Tsy maintsy miainga amin’ny fomba malagasy ihany ny hampandrosoana an’i Madagasikara satria izay ny lamina voajanahary.
… Noho izany, olona mahalala fomba no tokony hitondra ity firenena ity. Mahafaoka be eto ny atao hoe fomba. Azo tsinjaraina amin’ny fomba amam-panao, fomba fisainana, fomba nentina nanabe ny taranaka, fomba hoenti-manaja, fomba ifampifehezana, sns. Manana ny azy ny Malagasy raha ireny fomba ireny. Sahaza sy mifanaraka aminy sy amin’ny zava-misy eto amin’ny tanindrazany izany. Ny mahavariana anefa, tsy misy na misy ihany fa vitsy dia vitsy ireo mpitondra sy ireo izay te hitondra an’i Madagasikara mahafantatra izany. Toa milaza ankarihary na ankolaka ve izany fa tsy voataiza sy tsy nobeazina hahalala ny fomba malagasy izy ireo. Fampandrosoana inona ny antenaina amin’ny olona tahaka izany ?
… Raha mbola hijanona sy tsy afa-mijery afa-tsy ny fisodiky ny menaka (endrika ivelany : tsipy vola kely, akanjo, fampanantenana, teny mamy sy mampatory am-pitsanganana, vava malama…) ny Malagasy, hifatratra any amin’ny fahantrana lalina sy tanteraka i Madagasikara. Ilaina ny miverina amin’ny « takatra amorom-parihy, tsy matory fa miherim-panahy ». Fomba fandinihan’ny Malagasy zavatra io. Tsy mihinana amam-bolony fa mandinika sy mamakafaka tsara, izay vao misafidy.
… Iza amin’ireo kandidà ireo ny tena mahafantatra tsara an’i Madagasikara sy ny Malagasy ? Iza amin’ireo ny mahalala fa « ny fanahy no olona ». Zovy amin-jareo ireo no mataho-tody sy matahotra an’Andriamanitra ?… Fomba nentin’ny Malagasy nampirindra ny fiarahamonina nisy azy avokoa ireo fa tsy noforomporonina na notefitefena tany ananona tany.
Olon-kendry sy manam-panahy (ao anatin’ny fomba amam-panao malagasy ireo) no ilain’ity firenena ity. Izany hoe, ny Malagasy ihany no afaka mampandroso an’i Madagasikara !